आज यी चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्यो सेयर ? (सूचीसहित) - Arthatantra.com
आज यी चार कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्यो सेयर ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । मंगलबार बजार ४७.४९ अंकले घटेको छ । बजार परिसुचक पनि २८२८ अंकको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
उक्त दिन ६ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज विभिन्न चार कम्पनीको सर्वाधिक कारोाबर भएको छ ।
मंगलबार राधी विद्युत कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर, एचआईडीसीएल र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्बाधिक कारोबार भएको हो ।
उक्त दिन सबैभन्दा बढी राधी विद्यतु कम्पनीको ४९ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज कम्पनीको ६ लाख ३० हजार २४१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएकोक छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य भने ३.७८ प्रतिशतले घटेको छ । आज कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
मंगलबार सर्वाधिक कारोबार गर्ने दोस्रो स्थानमा रहेको नेशनल हाइड्रोपावरका ३६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज कम्पनीको १० लाख ६७ हजार २५९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३३१ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, उक्त दिन एचआईडीसीएलको २९ करोड ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३२ हजार ५१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६७ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरि मंगलबार नेपाल इन्स्योरेनस कम्पनीको २३ करोड ९९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । उक्त दिन कम्पनीको २ लाख ३ हजार ६४६ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार १४२ रुपैयाँ रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ असार १५ मंगलवार १५:१६ मा प्रकाशित
Previousसेयर बजारले तय गरेकै हो त ओरालो यात्रा ?
Nextनेप्सेको अध्यक्षमा दीर्घराज मैनाली, पुँजीबजारको उन्नतिका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता